Nhengo Mbiri dzeMDC Alliance Dzinobvisiswa Mari yeChibatiso
Gunyana 21, 2021
MDC Alliance Rural Masvingo
Vatungamiriri vaviri veMDC Allince kwaGutu, VaLangton Guvava naVaPhillip Mahachi, avo vakasungwa nemusi weSvondopaZvavahera vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo, vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mutongi wedare remajisitireti muMasvingo, Muzvare Conceptor Ngwerume,vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emaRTGS pamunhu kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo.
Muzvare Ngwerume vatiwo VaGuvava, avo vanova munyori wezvekudzidiziswa kwehutungamiri mudunhu reMasvingo, naVaMahachi vanova sachigaro weGutu North muMDC-A , vadzoke mudare musi wa 5 Gumiguru gore rino.
Gweta revaviri ava, VaMartin Mureri, vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekusazivisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo zvemusangano wavo.
Muchuchusi wedare, Muzvare Nyaradzai Mawerera, vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepaZvavahera mudunhu rekwa Gutu, vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kuzivisa vezvemutemo.
Vati zvakaitwa nevaviri ava zvinotyora mutemo weMaintenance of Peace and Order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwe enyika kutanga vazivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita.
Munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko nezvechizvino zvino muMDC Alliance, VaJonah Wakurawarerwa,vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa mukumbunyikidza kodzero dzenhengo dzeMDC Alliance.
Sachigaro weZanu PF muMasvingo, VaEzra Chadzamira, vange vasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC-A.